Archive du 09-oct-2020
Tratranao mampirafy izy, inona no ataonao ?
Ny fampirafesana no fahavalo voalohanny fitiavana. Ny tahotry ny fampirafesana no mahatonga ny olona ho saro-piaro.
Teknika fanafenana ny cernes
Avy aminny tsy fahampian-torimaso, harerahana, tsy fahampian-drano
no mahatonga ireo faritra manodidina ny maso ho bongo, mangana na matro-doko. Ianao ihany, araka izany, no mila manova sy mandrindra ny fiainanao, mba hiadiana aminireny cernes ireny. Ireto kosa ny torohevitra hanakonana azy ireny.
« Revitalisant » aminny coco : Manalefaka sy mamoaka ny «boucles »
Matetika dia ny menaka voanio foana no hampiasantsika aminny fikolokoloana ny volo noho ireo vokatsoa maro entiny. Eto dia ny fampiasana ny rononony atao « revitalisant » tsy mila kobanina indray no entina amintsika.
Nilaza tamiko anefa izy fa efa miaraka aminolon-kafa. Marary be ny foko, nefa aho tsy te hisaraka aminy, fa tiako ianarana izany mitia aminny saina izany.
Manala tasy aminny kiraron-dehilahy
Mety hisy tasy fotsy hiforona ny kiraro lenanny orana na rano. Manova tanteraka ny endriky ny kiraro izany. Azo hatao tsara kosa anefa ny manavotra azy. Atoronay anao :
Laoka sy biskoitra, aminny voanjo
Ilaina ny mihinana sakafo misy menaka natoray. Isanireo sakafo mitondra izany singa izany ny voanjo ary maro ireo sakafo azo karakaraina aminy.
Sih Rakout Fanehoana izay tsapa any anaty ny hosodoko
Famoronana akanjo no tena ahafantarana ani Sih Rakout na Sitraka Rakotoasimbola. Tany aminny taona 2014
Ady gasy ody kohoka sy sery ho anny ankizikely
Manana ny « ady gasiny » ihany koa ny fombam-pitsaboana nentim-paharazana, hitsabaona ny kohoka
Fomba fisakafo mahatanora lalandava
Raha te ho tanora lalandava dia tena ilaina ny fahaizana misakafo. Izay fomba tsotra kely izay dia efa ampy hampihemotra ny fahanterana.
FITARAINANNY MPAMPIANATRA Havondrona anaty bokikely iray vaovao
Mbola betsaka ireo olana sedrainireo mpampianatra eto amintsika na dia anisanny miantoka ny ho avinny taranaka
Fitaovam-pitsaboana natolotry ny Star sy ny Fondation Coca Cola Mitentina 1.170.000.000Ar, ho anny Reny sy ny zaza
Ny volana Mey lasa teo no efa nisy ny fampanantenana nataonny Star sy ny Fondation Coca Cola taminny Minisiteranny fahasalamam-bahoaka ny aminny hanoloranizy ireo fitaovam-pitsaboana maro samihafa, mitentina 300.000 dolara na 1.170.000.000 Ar
KRIZY NATERAKY NY COVID-19 Mirona aminny asa tenany ny vehivavy
Saika mirona kokoa mankany aminny asa tenany toy ny asa fanjairana avokoa ny ankamaroanny vehivavy eto an-drenivohitra aminizao, indrindra taorianny krizy nateraky ny fiparitahanny valanaretina COVID 19 teto amintsika.
EPP ANTANDROKOMBY Averina ny volanireo Ray aman-dReny efa voaloa
Nitondra fanazavana mikasika ilay lela-vola 30.000 Ar isaky ny mpianatra nalaina taminny Ray aman-dReninny mpianatra ao aminny EPP Antandrokomby Randrianjafy Elidio, talen-tsekoly ao an-toerana omaly.
FANAKANANA FANDRAVANA TRANO TAO FIANARANTSOA Olona 7 no voaroiroy, vehivavy ny roa
Olona miisa 7 no voaroiroy ary hatolotra ny fitsarana tsy ho ela ao Fianarantsoa, taorianilay raharaha nitranga tany an-toerana ny 25 Septambra teo,
PARKING 67 HA Tovolahy kely tratra nandrirotra rojonolona
Mila mailo hatrany isika eto an-drenivohitra manoloana ny firongatry ny mpanendaka. Raha efa tsy misy manao firavaka volamena intsony ny rehetra aminizao
Valan-javaboaharini Masoala Nahazo fanampiana ireo vondronolona ifotony
Miisa 91 ireo vondronolona ifotony miaina manodidina ny valan-javaboaharini Masoala no nisitraka fanampiana avy